फिल्म समिक्षा : एभेन्जर्स -इन्ड गेम
By soniya on	 25th April 2019 Highlights, समाचार, समिक्षा
एउटा भनाइ छ : ‘अगाडिको बाटो अलमल भयो भने पुनः शुन्यमै फर्क, तिमीलाई युद्ध जित्न सजिलो हुनेछ ।’ विज्ञानमा यसलाई ‘टाइम ट्राभल’ सिद्धान्त भनिन्छ जसलाई स्टिफन हकिङले सजिलोसँग व्याख्या गरिदिएका थिए । लाग्छ, ‘एभेन्जर्स : इन्ड गेम’ले थानोसलाई समाप्त गर्न र लुटिएका ६ वटै ढुंगा फिर्ता गर्न टाइम ट्राभललाई उपयुक्त रणनीति बनाएको छ जसमा दर्शकले चाख मान्न सक्छन् ।
तपाईं एन्थोनी र जोय रुसो दाजुभाइ निर्देशित हलिउडको यस सुपरहिरो फिल्मलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने दुई कुरालाई दिमागमा राखेर हलमा जानू राम्रो । पहिलो : टाइम ट्राभल थ्योरीको आधारभूत ज्ञान र दोस्रो : एभेन्जर्सका अघिल्ला सिरिजका पात्र र द्धन्द्ध । यी पक्षलाई आत्मासात गर्न सक्नुभयो भने तपाईंलाई ‘एभेन्जर्स : इन्ड गेम’ सर्वोत्कृष्ट लाग्न सक्छ । यस समिक्षकले ३ घन्टा २ मिनेटसम्म फिल्मसँग अन्तक्रिया गर्न सक्यो, पटकथा लेखनको यो सौन्दर्य हो ।
‘एभेन्जर्स : इन्फिनिटी वार’मा थानोस (जोस ब्रोलिन)ले एभेन्जर्स टीमबाट लुटेका ६ वटै ढुंगालाई फिर्ता ल्याउन हुने संघर्ष फिल्मको कथावस्तु हो । तर, कसरी ल्याउने ? यसका लागि सुपरहिरो समूहका लागि टाइम ट्राभलमार्फत विगतमा पुग्नु र थानोसको सर्वोच्चतासँग भिड्नु एउटा उपाय हो । फिक्सनको एउटा रोचक पक्ष के हो भने, व्यवहारमा त्यो सम्भव नभएपनि सिद्धान्तमा सम्भव हुन्छ र दर्शकले चाख लिन सक्छन् । टाइम ट्राभल यस्तै एउटा बहस हो जसलाई ‘एभेन्जर्स : इन्ड गेम’ले कथा वाचनको माध्यम बनाएको छ ।
दर्शकलाई पुरै समय बाँधेर राख्न सक्नु पटकथाको सशक्तता हो । अघिल्ला सिरिजका सबै सुपरहिरो र कथावस्तुलाई तीन घन्टामा स्पेस दिएर प्रस्तुत गर्नु चानचुने कुरा हैन । क्लाइमेक्स र रिजोलुसनमात्र चारवटा फिल्मको बैठान हो । पात्रको भीड हुँदाहुँदै दर्शकसँग अन्तक्रिया गराउन सक्नु र भावनाको सम्प्रेषण गर्न सक्नुमा क्रिस्टोफर मार्कस र स्टेफन म्याकफिलीद्धारा लिखित पटकथाको योगदान छ । खासगरि, एभेन्जर्सका वास्तविक दर्शकले पात्रसँग आफूलाई नोस्टाल्जिक महसुस मात्र गर्दैनन् टाइभ ट्राभलसँगै विभिन्न ग्रह र द्धन्द्धसँग भ्रमण गर्छन् । हलिउडको विशेषता भनेकै प्रविधि र कथालाई मिलाएर खास क्राफ्टको निर्माण गर्नु हो । स्वैरकल्पना र यथार्थरुपी दृश्यले ‘एभेन्जर्स : इन्ड गेम’लाई बलियो तुल्याएको छ ।
यस फिल्मको बटमलाइन ‘पावर भर्सेस पावर’ हो । अन्तरिक्षमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन ६ वटै ढुंगालाई कसले हात पार्ने भन्ने एउटा लडाइ । युद्ध सँधै निर्मम हुन्छ र कहिलेकाहिँ युद्धले दिने नतिजा सुखद पनि । ध्वनी र दृश्य इन्जिनियरिङ निकै बलशाली छ फिल्ममा । संगीतको सहि प्लेसमेन्टले पात्रको मुडलाई स्थापित गरिदिएको छ । थानोसविरुद्ध जब एकजुट हुन सुपरहिरोहरु एउटै पर्दामा आउँछन्, तब दर्शकीय ताली र सिठी उत्कर्षमा पुग्छ । दर्शकले आफूलाई त्यतिबेला सुपरहिरोको भूमिकामा महसुस गर्न सक्छन् ।
लाग्छ, हलिउड पछिल्लो समय लिडर हैन, हिरोको खोजीमा छ । लाग्छ, हलिउड सुपरहिरोभित्र मानवीयता भर्न चाहन्छ । लाग्छ, हलिउडले अब मेसिन भर्सेस मान्छेको युद्धमा मानवताको विजय खोज्यो । एभेन्जर्स : इन्ड गेम हेर्दा लाग्छ, हिरोइज्मभित्रको मानविय आत्मा सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । प्रशस्त ट्वीस्टको कारण फिल्मले दर्शकलाई निकै रोमान्चक तुल्याउँछ । आखिरमा के मर्छ ? कसले विजय प्राप्त गर्छ ? थाहा पाउन हलसम्मै पुग्नुपर्छ । यदि तपाईं स्टान लीले रचेका एभेन्जर्सका पात्र र सुुपरहिरोसँग नजिक हुनुहुन्छ भने ‘एभेन्जर्स : इन्ड गेम’ एउटा पर्व हो । मार्भल सिनेम्याटिक युनिभर्स तपाईंको सोच हो ।
सुपरहिरो कथामा तपाईंलाई रुचि छ र मार्भल सिनेम्याटिक युनिभर्सप्रति चाख छ भने निर्विवाद एभेन्जर्स : इन्ड गेम तपाईंका लागि हो । साइन्स फिक्सन, एक्सन र ड्रामा जनरको फिल्मलाई तन्नेरी दर्शकले रुचाउन सक्छन् । अन्तयमा तपाईं कसको पक्षमा हुनुहुन्छ : थानोस वा आइरन म्यान ?
निर्देशक : एन्थोनी र जोय रुसो
कास्ट : रोबर्ट डाउने जुनियर, क्रिस इभान्स, मार्क रफेलो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहान्सन्, ब्राय लार्सन लगायत
वितरक : वाल्ट डिज्ने
लम्बाइ : ३ घन्टा २ मिनेट